M.N's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog PostsDiscussions (47)EventsGroups (6) M.N's Likes M.N's Friends
View All M.N's Groups
Netwroking သမား တွေရဲ့ နေ့စဉ်တာဝန် တွေကို share ပေးကြပါဦး။
Started this discussion. Last reply by John Moe Apr 4, 2012. Is there anyone who has taken ccna in Singapore?
Started this discussion. Last reply by M.N Mar 18, 2012. Anyone knows about Basic Router configuration?
Started this discussion. Last reply by bonlay May 15, 2010. View All
M.N has not received any gifts yet
M.N commented on Sean Lin's group Google Android"font မတူလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆိုက်ကနေ Download Zawgyi Font http://www.myathayaphu.com/download.aspx download လုပ်ထား တာပါ။
credit ကို ဒီမူရင်းဆိုက် ၂ ခု ကိုပေးပါတယ်။ အဲဒီမှာ လုပ်စရာ ကျန်နေတာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်။ စမ်းတော့မကြည့်ရသေးဘူး။ :D
Failures…"Aug 30M.N commented on Sean Lin's group Google Android"ဒါကတော့ final result ပါ။
"Aug 30M.N commented on Sean Lin's group Google Android"၁။ Android Virtual Device တစ်ခု ကို အောက်ကပုံစံအတိုင်း create လုပ်ပါ။ Android 2.2 နဲ့ ARM processor ကို သုံးထားပါတယ်။
၂။ Android superuser.apk နဲ့ su ကို ဒီမှာ download လုပ်ပြီး zip ဖြည်ပါ။ ARM devices (2.0 – 4.1) အောက်က …"Aug 30M.N commented on Sean Lin's group Google Android"Android application ဘယ်လိုစရေးမလဲ။
ထုံးစံအတိုင်း Hello World ကပဲစရေးပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ IDE(Integrated Development Environment) အတွက် Eclipse ကို download မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Adnroid developer website ကနေ download လုပ်ရပါမယ်။ အခုဆိုရင်…"Aug 24M.N commented on Sean Lin's group Google Android"သိသလောက်ဖြေကြည့်မယ်လေ။ Android က Emulator ဖြစ်ဖြစ် real device ဖြစ်ဖြစ် root လုပ်ပြီးမှ font install လုပ်လို့ရတယ်။ ကိုယ် install လုပ်မဲ့ font ကိ်ု .ttf အနေနဲ့ download လုပ်ပြီး DroidSansFallback.ttf လို့ အမည်ပြောင်းပြီး root လုပ်ထားတဲ့ android ရဲ့…"Aug 24M.N replied to Aung Zin Than's discussion သိရင် ပြောဆိုဆွေးနွေးပေးကြပါခင်ဗျာ။"စလုံး လာမယ်ဆိုရင်တော့ မျိုးကြီး သီချင်းပြေး သတိရတယ်။ (p.s. just kidding! no offence. :P)"Mar 27Aung Ht replied to M.N's discussion Netwroking သမား တွေရဲ့ နေ့စဉ်တာဝန် တွေကို share ပေးကြပါဦး။"ကျန်တော်လည်း IT နဲ့ စလုံး မှာတင် ၂နှစ်လောက်ရှိတော့မယ်. ... အခုထိ အလုပ်ကို technical ပိုင်းအားမရသေးဘူး...
ကျန်တော် က တပိုင်းပိုင်းမှာ Strong ဖြစ်ချင်တာ... Network or somesystems တခုခုပေါ့၊ ဒါမှ ရွာပြန်ရင် ကို ကျွမ်းတာ တခုခုနဲ့…"Apr 3, 2012M.N replied to M.N's discussion Netwroking သမား တွေရဲ့ နေ့စဉ်တာဝန် တွေကို share ပေးကြပါဦး။">>>စာမေးပွဲဖြေပြီး Certificate လေးကိုင်ပြီး အလုပ်ဝင်၇င်ကောင်းမလားလို့ 
ဒီလိုပဲ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းပြီးတာနဲ့ ဒါမှမဟုတ် cert တစ်ခုခု ကိုင်ပြီး အူလည်လည် အလုပ်ဝင်ကြတဲ့သူချည်းပါပဲဗျာ။ ဘယ်သူမှ တဖက်ကမ်းခတ် တတ်ကျွမ်းပြီးမှ…"Apr 3, 2012 More... RSS
manawphyulay leftacomment for Aung Kyaw Htin7 hours agomanawphyulay leftacomment for Ko Chit8 hours agomanawphyulay and ugly devil are now friends8 hours agodevillove replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျWednesdaypeepaw replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျTuesdayNga_Pyort replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျMondayLIquid@crystal replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျNov 29pyiphyomgmgsoe updated their profileNov 26pyiphyomgmgsoe leftacomment for thinnNov 26pyiphyomgmgsoe replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Free SIP for Testing ! ! !Nov 26pyiphyomgmgsoe replied to Aung Myo Htet's discussion About CiscoNov 26Bijamon liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Nov 25 More... RSS